Falaqaynta GODOB iyo GALLAD – War La Helaa Talo La Helaa
Falaqaynta GODOB iyo GALLAD
By Hussein abdulle	 On Nov 19, 2018
Dhiganaha Godob iyo Gallad, waa Buug falsafadeed yaab leh! Kuna baraya waxa ay ku tiirsan tahay, ama ay tahay nolosha aadanaha, gaar ahaan tan Soomaaliyeed. Waa sheeko daaha ka rogaysa “caddaalad iyo caddaalad darro, dulmane iyo dulmi fale, ma naxe iyo miskiin, gar iyo gardarro”, dhabbahana u xaaraysa garsoor iyo caddaalad. Mar haddii lagu yiri: “Caddaalad” waan hubaa inaad gucatay waaya dhib badan oo ku soo maray, Godob na lagaa galay, ama ruux aad taqaan lagu la kacay gabood fal. Haddaba dhiganaha Godob iyo Gallad, wuxuu dhexda kaa qotominayaa noloshii sillooneyd ee ay soo mareen bulshada Soomaaliyeed waayihii hore. Si gaar ah waxa uu ku barayaa halka aan ka taagneyn garsoorka iyo sinnaanta.
Qof waliba hadal, lase kala heli og. Qof waliba qoraa noqoy lase kala qalin togan e. Waxad la fajacaysaa sida farshaxanka leh ee qoraagu sheekada u dhilay, shaqalka na u ebyay shibbanahana u tooxay.
Buug qoriddu waxay wax badan la wadaagtaa geeda qoridda. Tus: farsama yaqaanku, marka uu doonayo inuu soo saaro agab lagu intifaacsado, wuxuu soo gooyaa geedkii uu u ishaartay inuu u qalmo agab, ka dib wuxuu ku sameeyaa dhex bixisayn iyo faagid, markuu jaran-jaradaas ka gudbo, ayuu gelinayaa qormo iyo xaadin, ka dib ayuu haddana ku farshaxameynayaa sallaxid iyo kaarteyn jihaysan. Sidaas si la mid ah ayaa qoruhu na buugga ugu dhigaaliyay sheeko kasmaal ah, balse, marka aad dheehanayso aad is leedahay waa tii adiga kugu dhacday, ama hebel ku dhacday, waa dhacdo hebel iyo goob hebel.
Gacalka ha iska boobin qoruhu kuma yaqaan adiga, basle, wuxuu dersay dhurka iyo dhaqanka Soomaalida, sidaas ayuuna u soo qaatay dhacdadii ku qabsatay ama qof aad taqaan qabsatay mid u eg oo aanba laga aqoon.
Haddaba dhiganaha Godob iyo Gallad waa dhigane ku baraya waayihii nololeed ee +- ee laga soo gudbay.
Sheekadu, waxay ka billaabaneysaa wiil da’ yar oo ka soo diga roganaya nolosha miyiga ee dhibka badan, Una soo wareegaya nolosha magaalada oo ka sii dhib badan, haddii dhan kale laga eegana ka fudud. Adduunyadu iskuma kaa sheegto e, asigoo ciyaal filkiis ah dul taagan, lana yaabban waxa ay ku ciyaarayaan, ayaa waxa qabanaya ciidamadii loo soo tababaray inay isaga iyo kuwa la midka ah ilaaliyaan, balse, dhaqan geliyay maahmaadii ahayd: “Miskiin baa misko la fuulo leh.”
Ciidamadii shuftada ahaa, balse, huwan magac nabad jir ah, ayaa xabsi u taxaabaya wiilkii nolol raadiska ahaa, ka dibna wuxuu la kulmayaa jirdil iyo in dusha laga saaro dembi uusan gelin, kuna mutaysan karo dil toogasho ah. Markii aad halkaa marinayso ayaad arkaysaa adigoo candhuufta yug siinaya, faruuryaha na qaniinaya, si kale uma taqaannid e, ciil kaambi ayaa kugu dhacaya.
Buuggii tirada badnaana waxaad uga laacaysaa hal fadhi. Sabab kale maahan ee waa macaanida sheekada iyo sida uu u xanaf tiray qoraagu, ugana ilaaliyay deelqaaf iyo is waydaarasho naha iyo nuxurka ka qaadda sheekada. Wiilkaas da’da yar halkii lagu dambeysiiyay adigaa lagaa doonayaa inaad ka salgaato, xabsigii lagu aamburana kasoo saarto. Dhib badan u mari maysid soo deyntiisa, kaliya waxa kaa xiga adigoo dhiganaha Godob iyo Gallad wada aqriya., taas ood ka baraneyso wax badan oodan aqoon asiidse aad u baahneyd.
Ii oggolow inaan ku baro qoraha iyo Dhiganaha Godob iyo Gallad. Qoraha buuggu waa: Macallin, Barbaariye, bare sooyaal, qoraa, Aqoonyahan Xuseen Maxmed Cabdulle (Xuseen Wadaad) Dhiganahuhu wuxuu ka kooban yahay (396 bog) xajmiga warqaddiisuna tahay; (A5). Halka jeldigiisu yahay qafiif bilicsan oo bilaya sheekada iyo magaca ba.
Inta aan dhiganaha dhexda kaa gayn aan kuu bidhaamiyo waxa uu tebinayo magaca buugga iyo macnaha mugga leh ee ku jira, anigoo ka baadigoobaya suugaanta Soomaaliyeed ee dhaxal reebka ah.
Qaybihiisu waa: (22) mid walba tan kale ka anfariir badan tahay, kana dhilan tahay.
Waa maxay GODOB?Godob mar waa gef iyo fal abaal dhac ah oo qof ugu deyn gudayo qof hore wanaag ugu galladay. “Xumaan la kordhebay”Marna waa fal loo rogay dhankii wanaagsanaa oo godobti lafteedi ayaa lagu reebay godob kale. Say ku dhacday taasi? Inta aanan kaaga jawaabin taas, aan kuugu sii daro, in Weerta/weerdha Godob ay goysay qof nool oo Aadane ah qiimaheeda darteed. Iga rumayso oo sadarrada sii dhugo si aad uga salgaarto.Laba reer oo ood iyo ollog wadaag ah, ama xigto isu dhaw ah ayaa colaadi dhex martay, kolkaas ayaa markii la heshiisiinayay, waxay is dhaafsadeen (5) shan wiil iyo (5) gabdhood oo GODOB-REEB ah, si Godobti iyo xinkii dhexyiil loogu beddelo xidid iyo xigaalo. Hadda ba halkaas sow Godobtii ma noqon godob-reeb? Haah!
Waa maxay GALLAD?Gallad waa fal wanaag iyo abaal sheega, marna aan is beddelin oo wanaaggiisa u taagan goor walba iyo goob kasta ba. Gallad weligeed ba waxay u taagan tahay farxad iyo nayaayiir, meelna kama soo galaan walax dhimaal keena, sida qalbi jab iyo is cadaaweysi. Galladdu mar kale waa fal kowni ah oo Eebbuhu ku Galladu abuurkiisa. Marna waa sidaan soo tilmaamay oo waa abuur ama abaal uu Nooluhu galo ama isu galo.Ka kaalay aan labada ba, suugaanta ka dhex goobno e.
GODOB:Abwaan Maxamed Gacal Xaayow (AUN) wuxuu ku tilmaamay sidaan:
Gubayr-now ka taagnaa jiraye, Geel jiraa huwan.** ** **
Godka biyuhu waysugu tagaan, Jeexdintii godane
Ka war goobo geeddiga horseed, Waa gerqabayaa e
Gunburigaa darkaygii galee, Geela la cabaaya
Gasadiisa lama mayracdiyo, Golohow daaqaaye
Galab ceelku biya waa yohow, Iigu soo galaye
Gedkastoon ka yeela ba sibeey, Noqon lahayd goore
Gurbaannada kuwii tumay ayaan, GODOB u haystaaye
Gashigaygu ayagow la yaal, Waa na soo gudane
Gacan dhaafka iyo aabigaan, Gurayay raadkoor e
Guruubkii ujeeddada gurrucan, Gacan togaaleeyaay
Isla gurannay xaajada waxan, Kala gayoonnaa ba.** ** **
Gar baa furis leh geed baa leh tagis, Gubasho, ciil baa leh
Jannaa galis leh Naarbaa leh gubad, Godad qabuuraa leh
Xaqaa guul leh dulmigaa leh GODOB, Gocosha eex baa leh
Gaawaa culis leh Geenyaa leh qurux, Godal irmaan baa leh
Gu’ baa di’is leh geedaa leh bixis, Geeddi safar baa leh
Gal baa biya leh wabi baa gantama, Guuxna badahaa leh
Dhulku kala gabiibsane nimcada, Gayigan keennaa leh.** ** ***
Gugac iyo hillaac iyo haddey, Kiciso gaylaamo
Ninkaan guri makaab adag lahayn, Daadku wow gelliye
Geyigoo abaarsaday dhulkoo, Gaajo lala liito
Seddax guulna ow dhaanku yahay, Ceelka lagu gaaro
Gurgurshaa ninkaan haysan-baa, Gooman biyihiiye
Gebo gebo colaadeed haddow, Galawgu dhiillaabo
Gurdankiyo dabrayntii haddii, La isku geesaaso
Nin kaan gacalyo garab haysan baa, Guduri feentaaye
Galladdaya turriinshuhu haddow, Meel gal noqon waayo
Waa laga gudaa ruux wuxuu, GODOB xambaartaaye.** ** ***
Googgaale isagoo raboo, Gaar wax uga jeeda
Ninka yiri guntiisii intuu, Goob isugu keenay
Gebagebo colaadeed ninkii, Gawrac iga baajey
Xin engegan nin Geel iiga shubay, Gabar nin ii guurshay
Ninka iiga degay Geenyadiis, Guuro dhaxameedka
Afartaa i gacalaysatee GODOB ninkee baa leh.** ** ***JIIFTO:Abwaan Hadraawi asna wuxuu ka yiri:
Gacan baaban u holladay
Inaan geysto dhawr jeer
Misna waxaan gudoonsadey
Horta inaan u kuur-galo
Halka loo gol-leeyahay
Waa goorma goorteed
Gef dhacaan u haystoo
GODOB baan tirsanayee
Show waa gartoodee
Garas jilif leh baan ahay.** ** ***
Gar Allee la diriraa
GODOB weyn timaadaa
Marka uu gayaankaa
Garwadeen is moodoo
Ka guddoonsho taladaa
Ku yiraa gardaad iyo
Go’aankeyga soo raac
Oo gooni ii noqo
Is ka goo asxaab iyo
Gacal iyo xigaalkaa!** ** ***
Axdigiina gees marin
Kaga go’ay gayaankii
Haddii calafku gaabiyay
Gocashadu maxey tahay?”** ** ***
GODOB iyo gaf kaa galo
Waxow geestay gaadhsii
Yaaney garasho kaa galin
Bal umuli garaadkoo
Rog rog xaajo gudo weyn
Naftaadana xakama gali
Yaanay gocon waxii dhacay.** ** ***
Garan waa xusuusteed
Kan loo gaystay ciilkiyo
Galiilyada la ledi waa
Waana laba gudboon oo
Wakhtigaa mid garabsaday
Midka kale na gees maray.** ** ***
GODOB cashaq laga galay
Guhaad lagama waayee
U gargaar awooddide.
GALLAD:Abwaan Faarax Shuuriye (AUN) wuxuu ku tilmaamay Gallad sidaan:
Gujaalaan ku ridi ee maxaa, Libin ahuu gaaray?”■■ ■■ ■■
Galshax baan ku dhaarsiiyey iyo, Gaagur malabkeede
GALLAD mooyi saad uga naqiye, gaadeshaan huraye
Haddii fahanku kaa gaws qabsado, Saan isugu gaarey
Geyay iyo gabiir ayna jirin, Haw gunaanadine
Waxay kuugu geeddami qof geya, Inad u geysaaye.■■ ■■ ■■■
Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, wuxuu ku tilmaamay Gallad sidaan;
Wixii guul darraystaba naflaha, Wow gaggabayaa e
GALLAD nimaan ka qabo laguma oga, Gebiga Daarood e
Anaa gaafahaaygii nadhaye, Gayste nabarkiiye
Anna waxaan rasaastuu gingimay, Gini colaadeede
Gabagabaha Bari waxaa ku xigi, Go’aha Iidoore.■■ ■■ ■■■
JIIFTO:Abwaan Cabduqaadir Xirsi Yamyam (AUN).
Ayaan gacal wadaagnaa
Mahad aan go’ayn iyo
Waxaan haysanaa gacan.■■ ■■ ■■■
GALLAD qurux cod iyo luuq
Shimbiraha u gaarkaa
Gashan labada qaybood
Haddii ay galayrkiyo
Geesigooda caan baxay Gunta iyo salkaygana
Goodaaddo nacab iyo
Maska goodka halistaa
Gugummaa ku shiri kara.■■ ■■ ■■■
Godlo nabadda guraneey
Been gabraarataay gabbo
Runey goob walbaba gaar
Xummi gayfaney gamash
Wanaag gaabiyow orod
Guhaad gaardisaay gama’
GALLAD huruddayeey toos
Kibir gooddiyow gabax
Sammaan gaaxataay curo.Biyaaminta magaca ka kaalay, aan dhiganaha dhexdiisa isla dhuganno e.Maalintu waa maalin roobaad, abbaaraha ammintu waa seddex saac iyo nus subaxnimo, meesha la joogo waa xafiiska qareenka oo ku yaal xaafadda Raqay weyne oo ah meelaha ugu caansan beledka.Waxa iyaga oo aan is ogayn si kedis ah oo lama filaan ah u kulmay dad kala socda, haddana hal ujeeddo u wada socda, misna aan iska warqabin. Meesha la fadhiyo waa qolka afaafka hore ee fadhiga sugitaanka qareenka, waxa u dambeeyay oo soo galay waxa ay ahayd Maamma Dahabo oo iyadu rabtay uun in ay ballan uga sameyso qareenka galabta, si uu u soo booqdo xaafadda reer Maxaad-Cali.Waxa ka soo horreeyay oo isla goobta wada fadhiyo Col. Cabbaas oo laftiisa u yimid inuu qareenka siiyo warbixin uu ka siday arrinka ilmaha xiran, isla markaana wada sir culus oo uu rabo inuu qareenka la wadaago inta aanu u ambabixin meesha loo beddelay, arrinkaan uu daba socoday darteed.
“Dhib ma leh ee iyada soo hormari” ayuu qareenkii mar kale ku amray xoghayntiisa, iyana markiiba “waa yahay” ayay ku jawaab celisay. Xoghayntu markii ay ka soo baxday qolka qareenka ayay tiri “Maamma Dahabo soo dhaaf adigu” Maammadiina waa is taagtay una sii gudubtay qolkii qareenka………. ?
SOO JEEDINDhiganaha Godob iyo Gallad waa dhigane mudan inay aqriso qof walba oo Soomaaliyeed, dhugna u yeelato dhacdada uu tebinayo oo ah, mid ay ummadda Soomaaliyeed u oon qabto. Qoraagu wuxuu iftiimiyay dhacdo ku cibro qaadasho mudan in la dhaqangeliyo oo la dabbaqo na u baahan. Tusaalaha buuggu farfiiqayo haddii si dhab ah loogu dhaqmo waxa hubaal ah in ummaddeenna garaadkeedu dhismayo/kobcayo. Sidaa awgeed waa dhigne NOPEL ah, mudanna in falsafada ku aasan lagu turjumo afad kale, waa haddii qoraaga oggolaansho looga helo e.
GUNAANADFalaqayn-tu way ila fogaatay, wax kale maahan ee waa qiimaha dhiganuhu u leehay afka iyo bulshada. In aan dhowr bog oo kala duwan ka bidhaamiyo se amminkaa ii diiday, waxan se rejaynayaa inaad mar uun aqrin doonto, kolkaas na aad dhabaysan doonto inta aan kaaga tilmaamay iyo inta kale ee aan ka gaari waayay ba.
AFEEF:Afeef hore la how, ama adkaysi damo waa mah-maah dhahan e, waan ka afeefanayaa haddii aan daawga garan waayay, ma gefe waa Ilaahay oo ma jiro qof aan wax sagsaagin, haddii se ay iga dhacday ma ahan ku talogal ee waa qalin taraarax iyo xeelad li’i qoraaga buuggu na shaqo kuma leh.“Shifo ku aqriso GODOB iyo GALLAD”Falaqayn-ta Godob iyo Gallad W/D: Xasan Cabdulle Calasow “Shiribmaal”
Qaramada Midoobay oo shaacisay Dekadaha Somalia ee laga dhoofiyo Dhuxusha!
Sawirro:-Guddiga doorashada KGS oo Guddoomiye & kuxigeen doortay